रेनुको पहलमा भरतपुर महानगरमा बन्दैछन् यी ठूला परियोजना
चितवन, ६ माघ । भरतपुर महानगरपालिकाले ठूला पूर्वाधार आयोजनाका कामलाई तीव्रता दिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सेवासुविधा प्रदान गर्न सक्ने खालका योजनाहरु महानगरपालिकाले अघि बढाएको छ ।
महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहालले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर ठूला परियोजनाहरुको काम अघि बढाएको जानकारी दिइन् । उनले नेपालकै नमुना महानगर बनाउन स्वदेशी र विदेशी संघसंस्थासँगको सम्बन्ध र सहयोगलाई विशेष प्रथामिकता दिँदै चितवनमा ठूलो प्लान्टमा अर्गानिक कृषि प्रविधि ल्याउन, प्रविधिक शिक्षालय बनाउन र विकास निर्माणका आफूले विशेष पहल गरेको बताइन् ।
काम अघि बढेका महानगरका प्रमुख परियोजनाहरु :
नमुना सिटी हल
भरतपुर महानगरपालिकाले सिटी हलको काम सुरु गरिसकेको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहयोगमा जिल्ला समन्वय समितिको परिसरमा रहेको जग्गा महानगरपालिकाको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको छ । सिटी हलका लागि महानगरले चार बिघाभन्दा बढी जमिन पाएको हो । प्रमुख दाहालका अनुसार सिटी हलका लागि नक्साङ्कन गर्ने टोलीले काम थालिसकेको छ । नक्साङ्कन सकिएपछि चाँडै नै बोलपत्र आह्वान गर्ने उनले जानकारी दिइन् । दाहालले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग‍मार्फत रु. ५१ करोड विनियोजन भइसकेको बताइन् । उनले असारमा शिलान्यासको तयारी थालिएको जानकारीसमेत दिइन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला
महानगरले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने काम पनि सुरु गरिसकेको छ । केही समयदेखि जग्गाको कारण काम अलमलमा परेको थियो । तर, महानगरभित्रै पर्ने कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रहेको रामपुरमा जग्गा प्राप्त भएपछि निर्माण प्रक्रियाले तीव्रता पाएको हो । महानगरले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनसँगको सहकार्यमा रङ्गशाला निर्माण गर्ने बताइएको छ ।
महानगरका अनुसार ३० बिघा क्षेत्रफलमा बन्ने उक्त रङ्गशाला लगभग रु. तीन अर्बमा बन्नेछ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले देवघाटमा शव दाहगृह गृह बनाउन लागेको छ । यो परियोजनामा करिब १० खर्च हुने बताइएको छ । यसका लागि ठेक्का सम्झौतासमेत भइसकेको छ भने शव दाह गृह निर्माणका लागि मिलिनियम–सिद्धगढी जेभी काठमाडौंसँग यसै हप्ता सम्झौता हुने प्रमुख दाहालले जानकारी दिइन् । यो परियोजनाको काम दुई वर्षभित्र सकिने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
रिङरोड र लिङ्करोड
महानगरपालिकाकी प्रमुख दाहालले सडक विस्तार, कालोपत्रे र स्तरोन्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । उनका अनुसार महानगरको योजनामा परेका सघन शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १३ वटा सडक कालोपत्रे निर्माणको काम भइरहेको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले महानगरभित्र रिङरोड र लिङ्करोड निर्माणका लागि रु. एक अर्ब ५० करोड खर्च गर्न सक्ने गरी काम अघि बढाएको छ । यसका लागि पनि बोलपत्र आह्वान भइसकेका छन् ।
महानगरले भरतपुरस्थित केन्द्रीय बसपार्क र नारायणगढमा रहेको बसपर्कलाई थप व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ । बसपार्क व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले ठेक्का सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । प्रमुख दाहालले केन्द्रीय बसपार्कको व्यवस्थापनदेखि थप भौतिक पूर्वाधार विकास गरी नमुना बसपार्क बनाउने गरी काम अगाडि बढेको जानकारी दिइन् ।